ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ရာထူးမှ နုတ်ထွက် - Yangon Media Group
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်သွားကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိအလုပ်တာဝန်များမှ အနားယူလိုသောကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ် ၂၁ ရက်နေ့မှ စ၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကနေ နုတ်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၇၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့်အညီ လစ်လပ်သွားသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကို အလုပ်လုပ်ရက်ခုနှစ်ရက်အတွင်း ဖြည့်စွက်နိုင်ရေးအတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် အနားယူသောအခါ သို့မဟုတ် ကွယ်လွန်သောအခါ ဒုတိယသမ္မတ (၁) သည် ယာယီ သမ္မတတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ သမ္မတဦးကို ရွေးချယ်ရန် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ဒုတိယ သမ္မတ ၃ ဦးအနက်မှ တစ်ဦးကို သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဖြစ်သူ ဦးမြင့်ဆွေသည် လက်ရှိ အစိုးရတွင် ဒုတိယသမ္မတ (၁) တာဝန်ကို ယူထားသည်။
ငွေစင် ဂျူဘီလီပွဲတော်ကို ဗန်းမော်မြို့၌ ကျင်းပ၊ ကချင် တိုင်းရင်းသားများက မနော အကများဖြင့် ?
မက်ဆီနှင့် တွဲကစားရမည်ကို ဂရေဇ့်မန်း စိတ်လှုပ်ရှားနေ
ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီးတွင် တရားမဝင် သစ်စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဂိတ်များ၌ CCTV တပ်ဆင်မည်
အချစ်ဒရာမာ ‘တရားလား’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မကြာမီ ရိုက်ကူးမည်
မြန်မာ ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ ငှားရမ်းခနှုန်းထားအား တစ်ရက်လုံးစာဖြင့်တွက်၍ ပြောင်းလဲသွားရန်ရ??
ရွေးကောက်ပွဲ အငြင်းပွားမှု ရှုံးနိမ့်ခြင်းအပေါ် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ အယူခံတင်သွင်းထားမှု ကော်မရှင် ပလပ်